၁၈.၇.၂၀၁၇ ရက်နေ့ (၁၄:၀၀)နာရီအချိန်တွင် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၊ အစည်းအဝေးခန်းမတွင် သစ်တောဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(စီမံခန့်ခွဲရေး)ဦးဇော်မင်းနှင့် တာဝန်ရှိသူမျာအား WHO၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာန၊ USAID PREDICT Project တို့မှ တာဝန်ရှိသူများကလာရောက်တွေ့ဆုံ၍ National One Health Strategic Plan ရေးဆွဲနိုင်ရေးအတွက် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်….
၁၅-၇-၂၀၁၇ ရက်နေ့ ၁၆:၀၀ နာရီအချိန်တွင် ရွှေဘိုခရိုင် ဝက်လက်မြို့နယ် သစ်တောဦးစီးဌာနမှ သစ်တောဝန်ထမ်းများ မြို့မရဲစခန်းမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများပါဝင်သော ပူးပေါင်းအဖွဲ့သည် ဝက်လက်မြို့နယ် သစ်ရှားကွဲဘိနယ်၊ ဟန်လင်းကျေးရွာအနောက်ဘက်ရှိ တစ်ဖက်ဆည်အနီး၊ ဟန်လင်း-စိုင်နိုင်ကွေ့သွားကားလမ်းမပေါ်တွင် ရပ်တန့်ထားသောယာဉ်အမှတ်(MDY 3B-8194)UD Nissan Condor (၆) ဘီး ခေါင်းလိမ္မော်ရောင်ယာဉ်အားစစ်ဆေးရာတရားမဝင် တမလန်းခွဲသား(၈၄ ချောင်း=၅. ၆၀၃၈တန်)အား တရားခံ (၁)ဦးနှင့်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါသည်။
၁၄-၇-၂၀၁၇ ရက်နေ့၌ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်ခရိုင် လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ခေါင်းဆောင်၍ ပန်းတောင်းမြို့နယ် ဦးစီးအရာရှိနှင့် သစ်တောဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းများ ပါဝင်သောအဖွဲ့သည် တရားမဝင်သစ် ခိုးယူထုတ်လုပ်မှုများအား တောတွင်းနေရာများတွင် ကွင်းဆင်းရှာဖွေဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးလျက်ရှိရာ ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ ကျောက်ဖူးကြိုးဝိုင်း အကွက်အမှတ် (၇၉)နှင့် (၈၁) တောတွင်းနေရာများမှ တရားမဝင် ကျွန်း/သစ်ယာ/စကားဝါ/ယမနေ အပါအဝင် စုစုပေါင်း (၅၀)ချောင်း (၄.၀၇၃၂)တန်အား ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီး၊ တရားမဝင်သစ် နှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအား ဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူနိုင်ရေး စုံစမ်းရှာဖွေဖော်ထုတ်လျက်ရှိပါသည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇွန် လထုတ် သစ်တောကြေးမုံတွင် ဖော်ပြပါရှိသော စာရေးသူ တက်နေထွန်း(တောအုပ်ကြီး၊ တိုးချဲ့) ရေးသားခဲ့သည့် “ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့် လူသားတို့်ပယောဂကြောင့် ခန်းခြောက်ခဲ့ရတဲ့ ပူးပိုရေကန်” ဆောင်းပါးအား လူသားများ၏ပယောဂ(သို့)ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဟု ဝေဖန်မှုများနှင့်အတူ ခန်းခြောက်ခဲ့ရသည့် ပူးပိုရေကန်ဒေသတွင် ဂေဟစနစ်များ ပြန်လည်ကောင်းမွန်စေရေး ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်နေပြီ ဖြစ်သကဲ့သို့ သဘာဝဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများအား လူးသားအားလုံး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြစေရန် ရည်ရွယ်၍ ဂုဏ်ပြုဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
သစ်တောဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျှက်ရှိသော ဦးစီးအရာရှိ(ငွေစာရင်း) (လစာနှုန်းကျပ် ၂၅၀၀၀၀-၄၀၀၀-၂၇၀၀၀၀) ရာထူးနေရာများသို့ တိုးမြှင့်ခန့်ထားနိုင်ရန်အတွက် သတ်မှတ်အရည်အချင်းနှင့် ပြည့်စုံသည့် စာရင်းစစ်(၁)/ ရုံးအုပ်များအား လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏(၉-၆-၂၀၁၇)ရက်စွဲပါအမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃၅/၂၀၁၇ ဖြင့် ထုတ်ပြန်သည့်နိုင်ငံဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများကို ပြင်ဆင်သည့်နည်းဥပဒေများအရ ရေးဖြေစစ်ဆေးခြင်းပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် သတ်မှတ်အရည်အချင်းနှင့် ကိုက်ညီသည့် ဝန်ထမ်းများအား ရာထူးတိုးမြှင့်ခန့်ထားနိုင်ရန် ၁၇-၇-၂၀၁၇ ရက်နေ့ နံနက်(၉:၃၀)တွင် သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၊ ဧည့်ထမင်းစားဆောင်တွင် ရေးဖြေစာမေးပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်…
(၁၄-၇-၂၀၁၇)ရက်နေ့၊ (၁၄:၀၀)နာရီတွင် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၊ အင်ကြင်းခန်းမ၌ ပြည်ပနိုင်ငံများသို့သွားရောက်ခဲ့ပြီး ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသောဝန်ထမ်းများမှ အတွေ့အကြုံရှင်းလင်းခြင်း အစီအစဉ်ကို ကျင်းပပြုလုပ်ရာ ဒေါ်ဆုစန္ဒာအောင်(တောအုပ်ကြီး)ဝန်းကျင်/သားငှက်ဌာနမှ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် သွားရောက်လေ့လာခဲ့သည့် (ရေဝပ်ဒေသများ စီမံအုပ်ချုပ်မှုမြှင့်တင်ခြင်းဆိုင်ရာ လေ့လာရေးခရီးစဉ်)အတွေ့အကြုံများနှင့် ဦးအောင်ဆန်း(လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေမှုး) ဝန်းကျင်/သားငှက်ဌာနက တရုတ်နိုင်ငံတွင်တက်ရောက်ခဲ့သည့် (Thaining On Tourism Management in BIMP-DAGA,IMT-GT and GMS-Enhaning People to People Connetivity for Inclusive Growth) အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ အတွေ့အကြုံများကို ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး တက်ရောက်လာသည့် အရာထမ်း/ အမှုထမ်းများမှ အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈႏွႈင့္ သစ္ေတာအတန္းအစားက်ဆင္းမႈကို ျဖစ္ေစေသာ ဆန္းစစ္မႈရလဒ္မ်ားအား အတည္ျပဳေဆြးေႏြးပြဲ